Paartiin Taayilaand Illuminaatii waliin hidhata qabachuun himatame bilisaa bahe - BBC News Afaan Oromoo
Paartiin Taayilaand Illuminaatii waliin hidhata qabachuun himatame bilisaa bahe
Goodayyaa suuraa Hoogganaan Future Forward Tanatorn Juyangroongiruyankit himannichi siyaasaarra maddee jedhe
Manni murtii Taayilaand paartiilee morkaattootaa akka biyyattiitti gurguddoo ta'an keessaa tokko ta'e himannaan garee warra 'illuminati' jedhaman waliin hidhata qabdu jedhu irratti dhiyaaterraa bilisa baase.
Gareen 'illuminati' jedhaman kun hawaasa dhimmaafi ilaalcha icciitii ta'eefi dhokataa ta'e akka qabanitti yaadamanidha. [Gareen kun amantiiwwan bebbeekamoo biratti ergama dhokataa qabu jedhamani waan yaadmaniif akka addaatti ilaalamu.]
Himannaan isaanii kunis paartiin 'Future Forward' ilaalcha Illuminatii qabatanii sirna mootii biyyattii aangoorraa buusuu barbaadu kan jedhu ture.
Manni murtii heera biyyattii ammoo himannaan kun fudhatama hin qabuu jedheera. Balleessaan osoo irratti argamee paartiin kun ni uggarama ture.
Haata'u malee, ammas taanaan paartii kanarratti galmee himannaa hedduutu akka diigamuu malutu irratti dhiyataa jira.
Paartii Future Forward jedhamu kun erga hundaa'ee waggaa lamayyuu hin guutne.
Mootiin Taayilaand eegduusaa fuudhe
Sirna awwaalchaa mootii Taayilaand duraanii waggaa tokko booda raawwatamaa jiru
Dargaggoota biratti fudhatama argachuun isaas filannoo waliigalaa biyyattii keessatti teessoo paarlaamaa qoodachuun sadarkaa sadaffaa qabateera.
Ta'us, humni waraana biyyattii akka haroomfamu duulli paartichi gaggeesse deeggartoota mootummaa mufachiisera.
Mootummaa biyyattis janaraal humna waraanaa bara 2014 fonqolcha mootummaa raawwachuun aangoo qabateen bulaa jira.
Himannaa akkamitu ture?
Hoogganaafi hundeessaa Future Forward Tanatorn Juyangroongiruyankit irratti, akkasuma hojii raawwachiiftota irratti himanni dhiyaate fudhatama dhabes "qaama sochii mootii" ta'uudhaan himataman.
Taayilaand heera mootiin buluu deegggaru qabdi. Haata'u malee, maatiin warra mootii warraa Taayilaandiin leellifamu aangoosaaniitiin dhiibbaa akka uumaniif tumsa qabu.
Seerri yakkaa biyyattii warra mootii qeequu ni dhorkeera. Namni didee qeeqemmoo hidhaa cimaadhaan adabama.
Paartiichis warraa sirna mootii durii kana akka deeggaru himeera. Kibxata kaleessaa kanammoo 'warraa mootii kana aangoorraa buusuuf hin turre.. jedhaniiru.
Himannaan irratti dhiyaate garuu, Future Forward irratti Illuminatiitu dhiibbaa uumaa jira kan jedhudha.
Illuminaatiin hawaasa barnoota qabaniif addunyaa dhuunfachuu barbaadanii jedhu warreen yaada-rimee dhimmicharratti dhiyeessan.
Mallattoon Paartichaas Rog-sadee oliifi gadi gonbifamee kan garee Illuumnaati jedhaman ittin beekamaniin walfakkaata.
Komiin dhiyaatus garuu Future Forward fudhatama dhabsiisuus, Illuminaatiin sirni mootummaa durii ardii Awrooppaa keessaa akka kufu qooda qabu. Taayilaandittis kuffisuu barbaaduu himannaa jedhutu irratti dhiyaata.
Goodayyaa suuraa Deeggatoonni paartii Future Forward gammaachuusaanii wayita ibsatan
Dubbi himtuun paartii Future Forward Paanikaa Waamik akka himteetti, dhimmichi Paarticha dhabamsiisuuf yaalame jette.
"Qoccollaa siyaasaatii, itti yaadame dalagama," jetteetti.
Himannichi siyaasarraan kan maddeedhas jechuun ibsiteetti.
Taayilaand Mootii duraanii 'Puumiipoon Aduniyaadeey' sirna geggeessaa gochaa jirti
Adabbii du'aa: Biyyoota meeqatu ammayyuu du'aan nama adaba?